Faallo: Horay Ma U Maqashay Tigrayland, Amharaland & Oromialand – Xeernews24
Faallo: Horay Ma U Maqashay Tigrayland, Amharaland & Oromialand
28. Oktober 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Waxay saxaafada caalamku la socotaa waxa la gaadhsiiyay shacabkii Ogadenya ee aan hubasnayn oo fixadkoodu meel walba daadsanyahay, intii wadankii ku hadhayna waa qaar uu xareystay iyo qaar Seeftu dulsaaran tahay. Kadib waxuu u talaabay dhanka soomaaliwayn isagoo u kala googooyay Gobol, Gobol. Hadalba yaana idinku dalinine Dalkii jamhuriyada soomaaliya wuxuu u badalay ilma Land. Bahdilka noocaas ah waxaa laga soo kabsan doonaa oo kaliya markii la arko, Tigrayland, Amharaland, Oromialand, Gambelaland, Mushunguliland, Sidamaland iyo Canfarland. Waxaa xusid mudan inuuna dalka Soomaali-Galbeed waligii ka mid noqonin itoobiya hadana uuna kamid ahayn.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/images3DXTDC6B.jpg 135 372 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-28 18:47:592016-10-28 18:47:59Faallo: Horay Ma U Maqashay Tigrayland, Amharaland & Oromialand
Gantaal kuwa ridada dheer oo lagu riday magaalada Barakeesan ee Makka iyo Sacuudiga... Two Eritrean pilots defected with their Mig-29 jet fighter to Ethiopia